IBUDATA TEMP - MMEMME NYOCHA - 2019
Ụdị nkeji 1.11
Mgbe ụfọdụ mgbe ị na-arụ ọrụ na PC maka otu ihe ma ọ bụ ọzọ, ịkwesịrị ijikwa ọrụ nke processor ahụ. Akụrụngwa a tụlere n'isiokwu a na-ezute arịrịọ ndị a. Ụdị na-enye gị ohere ịhụ ọkwa nke processor n'oge ahụ. Ndị a na-agụnye ibu, okpomọkụ, na ugboro ole na mpaghara. Na mmemme a, ị nwere ike ọ bụghị naanị nyochaa steeti onye nhazi ahụ, kamakwa ịmechi omume nke PC mgbe ọ na-erute ọnọdụ dị oké njọ.
Mgbe ịmalite usoro ihe omume ahụ ga-egosipụta data banyere nhazi ahụ. Na-egosiputa ihe nlereanya ahụ, ikpo okwu na ugboro ole nke ọ bụla cores. A na-ekpebi ogo ibu na otu isi dị ka pasent. Ihe ndị a bụ okpomọkụ zuru oke. Na mgbakwunye na nke a niile, na windo ahụ, ị ​​nwere ike ịhụ ozi gbasara oghere, ọnụ ọgụgụ nke eri na mpaghara volta.
Core Temp na-egosiputa ihe gbasara ọnọdụ okpomọkụ nke onye isi na sistemụ usoro. Nke a na-enye ndị ọrụ ohere ịdekọ data banyere nhazi ahụ n'ebughị ịbanye na mmemme ihe omume ahụ.
Ịbanye na mpaghara ntọala, ịnwere ike ịhazi ihe omume ahụ n'ụzọ zuru ezu. Na ntọala taabụ ntọala, edozi oge imebi melite, enwere ikike ikikere Core, na akara ngosi dị na sistemụ ihe na na ọrụ ọrụ.
Akwụkwọ akụkọ ahụ na-agụnye ntọala customizable maka ọkwa okpomọkụ. Ya bụ, ọ ga-ekwe omume ịhọrọ nke data okpomọkụ ka igosipụta: kachasị elu, ọnọdụ dị elu, ma ọ bụ ihe ngosi usoro ihe ngosi n'onwe ya.
Ịhazi ọrụ ọrụ Windows na-enye gị ohere ịhazi ngosipụta nke data gbasara nhazi ahụ. N'ebe a, ị nwere ike ịhọrọ njirimara: nrụpụta processor, ugboro ole, ibu, ma ọ bụ họrọ nhọrọ iji gbanwee data niile edere otu.
Chebe nchebe n'elu
Iji chịkwaa okpomọkụ nke ihe nhazi ahụ, enwere nchedo nchedo ekpuchi. Site n'enyemaka ya, a na-edozi otu ihe mgbe ebutere ụfọdụ okpomọkụ. Site n'iji ya na mpaghara ntọala nke arụ ọrụ a, ị nwere ike iji mpaghara akwadoro ma ọ bụ tinye data achọrọ na aka. Na taabụ, ị nwere ike ịkọwa ụkpụrụ ndị ahụ aka, yana họrọ ihe ikpeazụ mgbe ọnye okpomọkụ nke onye ọrụ ahụ ruru. Omume dị otú ahụ nwere ike imechi PC ma ọ bụ mgbanwe ya na ọnọdụ ụra.
A na-eji ọrụ a iji dozie ọnọdụ okpomọkụ gosiputara na usoro. O nwere ike ịbụ na usoro ihe omume ahụ na-egosipụta njirimara ndị buru ibu site ogo 10. Na nke a, ị nwere ike ịhazigharị data a site na iji ngwá ọrụ ahụ "Okpomọkụ na-akwagharị". Ọrụ ahụ na-enye gị ohere itinye ụkpụrụ ma maka otu isi na maka cores processor niile.
Ihe omume ahụ na-enye nchịkọta zuru ezu nke usoro kọmputa. N'ebe a, ị nwere ike ịchọta data ndị ọzọ banyere nhazi ahụ karịa na isi igodo windo isi. Enwere ike ịhụ ozi banyere ụlọ ọrụ nhazi, ID ya, ụkpụrụ kachasị elu na voltaji, yana aha zuru ezu nke ihe nlereanya ahụ.
Maka ndị dị mma, ndị mmepe arụnyewo ihe ngosi na ngalaba ọrụ. Na ọnọdụ okpomọkụ dị mma ọ na-egosi na agba aja aja.
Ọ bụrụ na ụkpụrụ ahụ dị oké egwu, ya bụ ihe karịrị ogo 80, mgbe ahụ, ọkụ ahụ na-acha ọbara ọbara, jupụta ya na akara ngosi niile na panel ahụ.
Nhazi nke ndi di iche iche;
Ikike ịbanye ụkpụrụ maka mgbazi okpomọkụ;
Ngosipụta na-egosi ihe ngosi nke usoro ihe omume na sistemụ usoro.
N'agbanyeghị na ọ dị mfe nghọta na obere windo arụ ọrụ, usoro ihe omume ahụ nwere ọtụtụ atụmatụ na ntọala bara uru. N'iji ngwaọrụ niile, ịnwere ike ijikwa nhazi ahụ ma nweta data ziri ezi na ọnọdụ okpomọkụ ya.
Ibudata Ụdị Core maka n'efu
Igwe ihe omimi nke Intel Otu esi achọta okpomọkụ CPU Igwe ọkụ HDD Ebe ịchọta folda Temp na Windows 7
Template Core - usoro ihe eji eme ihe iji nyochaa ọrụ nke nhazi. Nlekota na-enye gị ohere ịhụ data na ugboro na ọnọdụ okpomọkụ nke mpaghara ahụ.
Onye Mmepụta: Artur Liberman